जाडो भयो असाध्यै (बालकविता) -रमेशचन्द्र घिमिरे जाडो भयो असाध्यै मुटु कमायो स्विटर लाउन पाएर भाइ रमायो । किताब-कापी फिँजायो कलम समायो कम्मल ओढ्न पाएर भाइ रमायो । अगेनाकै छेउमा आसन जमायो आगो ताप्न पाएर भाइ रमायो । कुइरो-हुस्सु फाटेर बल्ल घमायो घाम देख्न पाएर भाइ रमायो । - भोर्लेटार, लमजुङ... मंसिर ३०, २०७६
कविवर डिल्लीजङ गुरुङलाई महाकवि घोषणा गर्न माग नवराज पहाडी लमजुङ । कविवर डिल्लीजङ गुरुङलाई महाकवि घोषणा गर्न माग गरिएको छ । कविवर गुरुङको ११६औं जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको तीन दिने बृहत् साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमका सहभागी साहित्यकारहरूले त्यस्तो माग गरिएको हो । लमजुङको घनपोखरामा जन्म थलो भएका कविवर डिल्लीजङ गुरुङको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रले... मंसिर ३०, २०७६
दुई उत्कृष्ट कृतिको विमोचन नवराज पहाडी लमजुङ । लमजुङमा दुई उत्कृष्ठ कृतिको विमोचन गरिएको छ । कविवर डिल्लीजङ गुरुङद्वारा लिखित सात कृतिको संगालो समुच्चयन– भाग २ र ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशन गरेको स्मारिका– २०७६ को विमोचन गरिएको हो । लमजुङमा साहित्यको उषाकालीन अवधिमा उदाउनु भएका कविवर डिल्लीजङ... मंसिर ३०, २०७६
झरीमा यतिखेर म, डुबानमा फसेका धुरीहरुसँग छैन, न चुहिएर छानो रातभरि जागै बसेका आँखाको पीडासँग छु ? मंसिर २९, २०७६
'कविता लेख्नु बन्जी जम्प गर्नु जस्तै हो'- भुपाल राई कुन पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ ? -यो प्रश्न , कुन रङ्ग कुन डिजाइनको माल बनिदैछ भनेर कुनै कारखानालाई अथवा कुन मोडल कुन लटको गाडी आयात गरिदैछ भनेर नाफाखोर दलाललाई सोध्ने जस्तो प्रश्न भयो । अथवा कुनै घोर व्यवसायिक आख्यानकार या ती निबृत्त सरकारी पदाधिकारी जो... मंसिर २९, २०७६
वरिष्ठ कलाकार दिपक क्षेत्रीको निधन, भाेली अन्तिम संस्कार क्षेत्रीकी श्रीमती मलेसियामा रहेको कारण उनी भोलि नेपाल फर्केपछि मात्रै अन्तिम संस्कार गरिने मंसिर २८, २०७६
दीपा राई पुनकाे कविता: फूलको जुलुस म हिँड्ने बाटोभरि फूलहरूको जुलुस थियो । साना, ठूला, रङ्गीविरङ्गी सबैसबै वस्तुनिष्ठजुर्मुराएर बिउँझेको थियो विचित्र, वैविद्य चेतनाले हुनुपर्छविविधभित्रको एकताअनि सङ्गतिको आवाज थियो । म बाटोछेउ लागेर आएँसघाएनन् रे चाँप र उतिसलेगुलाबी सौन्दर्यको छेउमै उभिएको भेदक काँडाउनीहरूमा पनि बिरोधाभास थियो ।... मंसिर २८, २०७६
'थाँक्रा'मा के छ ? लैजानोस् बा ! तपाईको छोरोलाई फेरि झ्याँइ–झ्याँइ बिहा गर्दिएर यात्रा यात्रा छोरो जन्माउनोस् । मेरा छोरीहरूले तपाइँका वंश धानेन । तिन्हरु मान्छे भएर जन्मियो मात्रै, तर मान्छे मानिएन । मंसिर २७, २०७६
...यस्ता उपन्यासहरु खेलियाेस् मलाई चाहिँ शब्द, अर्थ, परिभाषा, कार्यन्वयनबीचकाे दुरि र भेद बुझाउने उपन्यासहरु खेलियाेस जस्ताे लाग्छ । ... शुत्रहरु बुझाएर पुस्तक खेलियाेस जस्ताे लाग्छ । मंसिर २५, २०७६
घुमाउने घर (बालकविता) - रमेशचन्द्र घिमिरे घुमाउने घर (बालकविता) - रमेशचन्द्र घिमिरे कता गए झिँगटी कता गए खर ? कता गए पुराना घुमाउने घर ? ढुङ्गा फोर्ने कर्मी दाइ... मंसिर २४, २०७६
क्लासिक नपढी गतिलो लेखक बन्न सम्भव छैन् - महेश पाैड्याल सबै लेखकले जीवनकालमा एकचोटी होमर पढून, प्लेटो र अरस्तु पढून, अमरकोश पढून, कालीदास पढून, महाभारत र रामायण पढून, माक्र्स पढून, निच्से र फुको पढून, टेगोर र टनी मरिसन पढून, मार्खेज पढून । मंसिर २४, २०७६
सम्झना साधनाका दुई गजल : बन्द कोठाभित्र राेएँ बिगतलाई सम्झिएर,बन्द कोठाभित्र तिम्रो यादमा तड्पिएर,बन्द कोठाभित्र बाँचुन्जेल सम्हालेर राख्नु है प्रिया भन्दै गयौ केहि निशानी दिएर,बन्द कोठाभित्र तन मन लगाएरै माया गरेकी थिए मैलेकहिले आउँछौ फर्किएर,बन्द कोठाभित्र हरेक पल तिमी आउने बाटो हेर्छन् आँखा भन कति बसौं पर्खिएर,बन्द कोठाभित्र जीवनभर साथ दिने बाचा... मंसिर २३, २०७६
पागल हुन मन छ ! वलराम तिमल्सिना गजल मलाई साँच्चै साँच्चै साँच्चै पागल हुन मन छ पागलपनका सवै सीमा र उचाई छुन मन छ ! तिम्रा जुत्ता चाटी चाटी टिलिक्क टल्काउने सद्धेहरुको देखेर हालत बेस्सारी रुन मन छ... मंसिर २३, २०७६